ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “နမော်နမဲ့”
ရီ ရ တယ် ဗျို့ ၊ ဗြဲ
ကိုပေါရေ...တော်သေးတယ်...ဒီတခါအိမ်မှာဖတ်မိလို့...နို့မို့ရုးံမှာ အကျယ်ကြီးထရယ်မိဒုက္ခ...ခုတောင်ကွန်ပြူတာကြီးကြည့်ပြီး အူတက်အောင်ရယ်နေတာ ကြည့်ပြီး အိမ်ကလူတွေ??????....နမော်နမဲ့တွေက ရယ်ချင်စရာကောင်းသလို...စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါ...မျက်စိထဲကွင်းကွင်းကွက်ကွက် မြင်အောင်ရေးနိုင်တဲ့ အရေးအသားကိုလဲ နှစ်ခြိုက်မိပါရဲ့...
Since I have read your post about an old movie"Bo Aung Din", I keep reading all your posts.Some of them gave me different thoughts, and alot of them made me laugh.Little did I know that many Burmese talents are out there.Thanks for sharing with us.
တောက်...........အဲ့ဒီကထဲက တခါထဲ ရောဂါကူးလိုက်ရမှာ....
HaHa This is the frist time that i read blog.Thxalot for sharing.
ကာတွန်းမောင်လွင် ရဲ့ ငထက်ဖြား လိုက်ရှာရင်း ဒီပို့စ်ကိုဖတ်ရတာ.. ရီရတယ်။ ကျေးဇူးပဲ ကိုပေါ။